पानी-घुलनशील नैनो-THC फॉर्म्युलेसन Sonication साथ - Hielscher अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
THC- वर्धित पेय पदार्थको निर्माण चुनौतीपूर्ण छ। – THC- संचार पेय एक उच्च जैव उपलब्धता प्रदान गर्न को न्यानो-पायसीकृत हुनु पर्छ र यसैले शक्ति, दीर्घकालीन स्थिरता र स्पष्ट उपस्थिति। पेय पदार्थमा THC को अल्ट्रासोनिक न्यानो-पायसीकरण अत्यधिक कुशल र प्रभावशाली छ जसले एक उच्च टीएचसी पेय पदार्थको परिणाम दिन्छ।
Ultrasonically Nano-Emulsified THC
THC का लागि नयाँ उपभोग विधिहरू खोल्नको लागि, THC- संवर्धित पेय पदार्थ र खाद्यहरू जस्ता विकल्पहरू बढ्दै छन्। अल्ट्रासोनिक इमल्सिफाइ devices उपकरणहरू खाना-ग्रेड, सफा लेबल र लामो समयको स्थिर न्यानो-इम्ल्सन उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक पायसीकरण खाना-ग्रेड स्टेबलाइजर्ससँग मिल्दो छ (उदाहरण: Stuph नानो-पायसीकारी), जसले तपाईंलाई असाधारण उच्च जैव उपलब्धताका साथ उच्च-गुणवत्ता, दीर्घ-अवधि स्थिर स्पष्ट न्यानो इम्ल्सनहरू तयार गर्न मद्दत गर्दछ। अल्ट्रासोनिक न्यानो-इम्ल्शन्सले THC लाई पानीमा घुलनशील, न्यानो-वर्धित मिश्रणमा परिणत गर्दछ, जुन खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थहरूमा थप्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक पायसीकरणले तपाइँको गठनको मूल स्वादमा हस्तक्षेप गर्दैन।
प्रोब-प्रकार अल्ट्रासोनिकेटरहरूले पेय पदार्थहरूको लागि न्यानो-वर्धित, पानीमा घुलनशील THC न्यानो-इम्ल्शन्स र उच्च जैव उपलब्धताका साथ खाद्य व्यंजनहरू उत्पादन गर्दछ!
स्पष्ट गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, "हेर्नुहोस्-थ्रु" CBD न्यानो-इम्ल्सन्स्? त्यसोभए CBD र hemp तेल nanoemulsion को लागि Sonication को बारे मा अधिक जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
किन THC Nanoemulsion?
THC-Nano-Emulsion नानो आकारको तेल-इन-वाटर (O / W) इमुल्शनहरू हुन्, जसको स्पष्ट / पारदर्शी उपस्थिति र लामो समय स्थिरता हुन्छ। THC एक तेल परिसर हो, जुन प्राकृतिक अवस्थामा पानीमा मिसिन सकिदैन किनभने तेल र पानीले एक अर्कालाई अस्वीकार गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेसनले मेकानिकल शियर प्रदान गर्दछ, जसले न्यानो आकारमा तेल र पानीका थोप्लाहरू अवरुद्ध गर्दछ। न्यानो-स्केल ड्रपलेट आकारका कारण, न्यानो-इम्ल्शन्सको पारदर्शी, स्पष्ट उपस्थिति हुन्छ र ग्यारेन्टी स्थिर हुन्छ, जसको अर्थ तेल र पानीको चरणहरू अलग हुँदैन। तेल बायोएक्टिभ यौगिकको सानो बूँदाहरू, अर्थात THC, धेरै साना पानीको थोप्लाहरूले भरिएको हुन्छ। एक इम्सुलिफायर / सर्फ्याक्टन्टले न्यानो-इमल्शनलाई दीर्घकालीन स्थिर बनाउन मद्दत गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक न्यानो-इम्ल्शन्सले उत्कृष्ट जैवउपलब्धता प्रदान गर्दछ, जुन सीयोडी, टीएचसी, भिटामिन, पोलिफेनल्स आदि जस्ता बायोएक्टिभ यौगिकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, ताकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन र उनीहरूको स्वास्थ्य लाभदायक गुणहरूको संख्या बढाउन। यसैले, अल्ट्रासोनिक रूपमा तयार गरिएको न्यानो-इम्ल्शनहरू खाद्य, पेय पदार्थ र कस्मेटिक उद्योगमा फॉर्मूलेसनको लागि उपयुक्त छन्। एक उत्कृष्ट जैवउपलब्धताको साथ नानो-इम्ल्शन्सको उत्पादन, अल्ट्रासोनिक न्यानो-इमल्सिफिकेसन पेय पदार्थहरू, खाद्य, आहार पूरकहरू, र अत्यधिक जैवउपलब्ध THC समावेश गर्ने सौन्दर्य प्रसाधनहरू तयार गर्न सजिलो र भरपर्दो प्रविधि हो।
UP400St, एक 400 वाट शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक homogeniser, उत्पादन न्यानो-नक्कली THC पेय पदार्थको लागि।
Sonication को माध्यमबाट स्पष्ट, पानी घुलनशील THC Nanoemulsion कसरी तयार गर्ने
अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायरहरू सजिलै प्रयोग गर्न सकिने उपकरणहरू हुन्, जसले तपाईंलाई तपाईंको THC तेल-इन-वाटर न्यानोमुल्सन बनाउँदछ। अल्ट्रासोनिकेटरहरूले तपाइँको मिश्रणमा केवल मेकानिकल शियर लागू गर्छन्, उदाहरणका लागि पानीमा THC, परिणामस्वरूप बनाउने खाना ग्रेड हो। Sonication लगभग कुनै पनि पायसी एजेन्ट (स्ट्याबलाइजर / सर्फ्याक्टन्ट पनि भनिन्छ) को साथ उपयुक्त छ। फूड-ग्रेड इमल्सिफाइंग एजेन्टहरू छनोट गर्दै (उदाहरण: Stuph नानो-पायसीकारी) तपाइँलाई एक उच्च जैव उपलब्ध फारममा THC समावेश गरीएको एक सुन्दर क्लीन लेबल, फूड-ग्रेड न्यानो-वर्धित फॉर्मूलेशन तयार गर्न मद्दत गर्दछ।
THC तेल युक्त एक नानो-इमल्सन तयार गर्दा, THC तेल घटकलाई एक वाहक तेलमा पातलो गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, Hemp बीज तेल वा MCT तेल। पछि, तेल चरण UP400St जस्ता अल्ट्रासोनिकेटरको प्रयोग गरेर पानी (जलीय) चरणमा डुबाइन्छ। Sonication एक द्रुत र कुशल न्यानो-पायसीकरण प्रक्रिया प्रदान गर्दछ। केहि मिनेट पछि, पारदर्शी, दीर्घकालीन स्थिर तेल इन-वाटर न्यानोमुलसन तयार छ।
अल्ट्रासोनिकेसनको साथ, न्यानोमुल्सनको उत्पादन यति सजिलो हुन्छ!
अल्ट्रासोनिक नानो-पायसीकरण को फाइदा
उच्च जैव उपलब्धताका साथ Nanoemulsion हटाउनुहोस्
छिटो & कुशल
लामो समय स्थिरता
खाद्य र फार्माका लागि
सुरक्षित & प्रयोग गर्न सजिलो
THC-NanoEmulsion को लागी उच्च प्रदर्शन Ultrasonicators
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स प्रणालीहरू भरपर्दो मेसिनहरू हुन् जुन फार्मास्यूटिकल र पूरक उत्पादनमा उच्च गुणस्तरका पूरक फॉर्म्युलेसनहरू तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन न्यानो-इम्ल्सनदेखि लिपोसोम, नानोस्स्ट्रक्चर लिपिड क्यारियर, सॉलिड-लिपिड न्यानो पार्टिकल्स, र समावेशन जटिलहरू हुन्छन् जसमा भिटामिन, एन्टिआक्सिडन्टहरू भरिएका हुन्छन् , flavonoids, पेप्टाइड्स, polyphenols र अन्य bioactive यौगिकहरु र उच्च बायोभाई उपलब्धता, महान स्थिरता र कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, टिंक्चर र पूरकहरूमा THC को न्यानो-पायसीकरणको लागि, हिलस्चरले तपाईंलाई तपाईंको उत्पादन आवश्यकताहरूको आकारमा शक्तिशाली र भरपर्दो अल्ट्रासोनिकेटर प्रदान गर्दछ। आफ्ना ग्राहकहरूको मागहरू पूरा गर्न, हिलस्चरले नट्रोपिक्स र स्मार्ट ड्रग फॉर्मूलेसनको उच्च मात्राको उत्पादनको लागि पूर्ण रूपमा औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरूमा कम्प्याक्ट ह्यान्ड-लेबल्ड होमोजिनाइजर र बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरहरूबाट अल्ट्रासोनिकेटर्स आपूर्ति गर्दछ। अल्ट्रासोनिक बनाउने प्रक्रियाहरू ब्याचको रूपमा चलाउन सकिन्छ वा अल्ट्रासोनिक फ्लो-थ्रु रिएक्टरको प्रयोग गरेर निरन्तर इनलाइन प्रक्रिया चलाउन सकिन्छ। तपाईको लिपोसोम उत्पादनको लागि इष्टतम सेटअप सुनिश्चित गर्न अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोड (प्रोबहरू) र रिएक्टर जहाजहरूको विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध छन्। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतताले भारी शुल्क र मांग वातावरणमा २ 24/ duty अपरेशनको लागि अनुमति दिन्छ।
बोट जीनस क्यानाबिसलाई हेम्प र मारिजुआना बिरुवाहरूमा छुट्याउन सकिन्छ।
क्यानाबिडियोल (सीबीडी) हेम्प र मारिजुआना बिरुवाहरूमा पाइन्छ, यद्यपि यौगिकहरू टेट्राहाइड्रोकाबिनोल (टीएचसी) मार्जियाना बिरुवाहरूमा विशेष रूपमा उपस्थित हुन्छन्। टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल (टीएचसी) र क्यानाबिडिओल (सीबीडी) दुईवटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्यानाबिनोइडहरू हुन् जुन भांगमा पहिचान गरिएको कम्तिमा ११3 क्यानाबिनोइड हो। टीएचसी भांगको प्रमुख मनोवैज्ञानिक घटक हो, रसायनिक रूपमा (-) - ट्रान्स-Δ t-टेट्राहाइड्रोकाबिनोल। परिभाषा अनुसार, भांग बिरुवाहरू भांगका बोट हुन् जसमा ०. 0.3 प्रतिशत भन्दा कम THC हुन्छ, जबकि गाँजा बिरुवा भांग बोटहरू हुन् जसमा THC को उच्च सांद्रता हुन्छ। हेम्प औद्योगिक फाइबर उत्पादन गर्न बालीको रूपमा पनि उब्जाउछ। सीबीडी, हेम्पको मुख्य बायोएक्टिभ यौगिक, एक गैर-साइकोएक्टिव पदार्थ हो, जसको मतलब CBD ले तपाईंलाई "उच्च" बनाउँदैन। सीबीडी व्यावासायिक रूपमा विभिन्न रूपहरूमा उपलब्ध छ जस्तो कि टिन्चर, जेल, गम्मी, तेल, ट्याबलेट, क्याप्सुल, पूर्ण स्पेक्ट्रम अर्क, टोपिकल्स (क्रीम, लोशन, बाम, तेल र मलहम) आदि।
THC मारिजुआनामा मुख्य साइकोएक्टिभ बायोएक्टिभ पदार्थ हो जुन खुशीको उच्चताको लागि "उच्च" भावनाको लागि जिम्मेवार हुन्छ। THC लाई "झार" संयुक्त धूम्रपानको माध्यमबाट वा THC- समृद्ध खाद्यहरू, जस्तै brownies उपभोग मार्फत इन्जेस्टेड गर्न सकिन्छ। यो तेल, टिन्चर, क्याप्सूल, र प्रशासनको अन्य प्रकारहरूमा पनि उपलब्ध छ।
दुबै भांग यौगिकहरू, सीबीडी र टीएचसी मानव एन्डोकानाबिनोइड प्रणालीसँग बाँध्छन्, तर प्रत्येक कम्पाउन्डको धेरै फरक प्रभावहरू हुन्छन् (जस्तै गैर साइकोएक्टिभ बनाम साइकोएक्टिभ)।
दुबै, सीबीडी र टीएचसी चिकित्सीयका रूपमा परिचित छन्, जुन औषधि वा औषधीय पूरकको रूपमा धेरै रोग र चिकित्सा सर्तहरूको उपचार गर्न वा राहत दिन प्रयोग गरिन्छ। CBD यसको विरोधी भडकाउने र आरामदायक प्रभावहरूको लागि परिचित छ। यसैले यो पूरक उपचार को रूप मा प्रयोग गरीन्छ विभिन्न रोगहरु जस्तै दौरा, सूजन, पीडा, मानसिस वा मानसिक विकार (जस्तै OCD), इन्फ्लेमेटरी बोवेल सिन्ड्रोम (IBS), मतली, टाउको दुखाइ र माइग्रेन, डिप्रेसन, र चिन्ता जस्ता विभिन्न अवस्थामा सहयोग पुर्‍याउन।
THC द्वारा पीडा, मांसपेशीको ऐंठन, जलबिन्दु, अनिद्रा, कम भोक, मतली, र चिन्ता जस्ता चिकित्सा अवस्थाहरूलाई कम गर्न प्रयोग गरिन्छ।